Vashambadzi Vanofanirwa Kurega Pamunhu Wemunhu? | Martech Zone
Vashambadzi Vanofanirwa Kurega Pamunhu Wemunhu?
Svondo, Kurume 29, 2020 Svondo, Kurume 29, 2020 Garin Hobbs
Chinyorwa chazvino chaGartner chakashuma:
Na2025, 80% yevatengesi vakaisa mari mukuita kwavo vachasiya zvavanoita.
Kufanotaura 2020: Vashambadziri, Ivo Haasi Iwo Iwo Mauri.
Zvino, izvi zvingaite senge panotyisa maonero, asi izvo zvisipo ndiwo mamiriro, uye ndinofunga ndizvo izvi…
Ichokwadi chakasarudzika chokwadi kuti kuoma kwebasa kunoyerwa zvine chekuita nematurusi uye zviwanikwa zvaunazvo. Semuenzaniso, kuchera gomba nepasipuni chiitiko chinosiririsa zvisingaite kupfuura nehurefu. Nenzira imwecheteyo, kushandisa yechinyakare, enhoroondo dhata mapuratifomu uye mameseji mhinduro kutyaira yako yekuita sarudzo inodhura zvakanyanya uye yakaoma kupfuura zvainofanira kuve. Iyi poindi yekuona inoita senge inotsigirwa nenyaya yekuti, painobvunzwa, vatengesi vakataura, kushomeka kwe ROI, njodzi dzekutonga kwedata, kana zvese zviri zviviri, sezvikonzero zvavo zvekutanga zvekurega.
Hazvishamise. Kuita kwako munhu kwakaoma, uye zvinhu zvakawanda zvinoda kuuya pamwechete musimfoni kuti zviitwe zvese zvinobudirira uye zvine mutsindo. Sezvazvakaita nezvakawanda zvebhizinesi, kubudirira kuitisa kwekushambadzira zano kunouya pamharadzano yezvinhu zvitatu zvakakosha; Vanhu, Maitiro, uye Tekinoroji, uye matambudziko anomuka kana izvo zvinhu zvisingaite-kana zvisingakwanise - kufambirana.
Kuita kwako: Vanhu
Ngatitangei vanhu: Kugadziriswa uye kunoreva uye kunoshanda kunotanga nekuva nechinangwa chakakodzera, kuisa mutengi pakati peiyo kukosha-centric rondedzero. Hapana huwandu hweAI, predictive analytics kana otomatiki inogona kutsiva iyo inonyanya kukosha chinhu mukutaurirana: EQ. Saka, kuva nevanhu chaivo, vane pfungwa dzakakodzera, hwaro.
Kuita kwako: Maitiro
Tevere, ngatitarisei urongwa. Maitiro akakosha emushandirapamwe anofanirwa kufunga nezvezvinangwa, zvinodiwa, kuiswa, uye nguva dzemubatsiri mumwe nemumwe, uye nekutendera zvikwata kuti zvishande nenzira yavanozvivimba nayo, vakasununguka uye vanobudirira. Asi vatengesi vakawandisa vanomanikidzwa kukanganisa, vachiona mashandiro avo akaganhurirwa uye achiudzwa nekukanganisa kwemidziyo yavo yekutengesa uye mapuratifomu. Maitiro anofanirwa kushandira timu, kwete imwe nzira yakatenderedza.
Kuita kwako: Tekinoroji
Pakupedzisira, ngatitaurei nezvazvo Technology. Mapuratifomu ako ekushambadzira uye maturusi anofanirwa kuve chizere chekugonesa, chinowedzera simba, kwete chinhu chekumisikidzwa. Kuita munhu zvinoda kuti vashambadzi ziva vatengi vavo, uye achiziva vatengi vako vanoda data ... yakawanda data, kubva kune akawanda masosi, akaunganidzwa uye akagadziridzwa zvinogara zvichingoitika. Kungova neiyo data hakuna kukwana zvakakwana. Iko kugona kukurumidza kuwana uye kusefa zvinonzwisisika zvinoitika kubva kune iyo data iyo inobvumidza vashambadzi kuendesa iwo akasarudzika mameseji ayo anochengeta ese ari maviri mafambiro uye mamiriro ezviitiko zvevatengi vanhasi.
Mazhinji eanozivikanwa uye kuvimba mapuratifomu anorwira kusangana nezvinoramba zvichingowedzera zvinonetsa mushambadzi wemazuva ano Dhata rakachengetwa mumatanho ekare ematabhuru (ehukama kana neimwe nzira), inowanzo kuve yakaoma (uye / kana inodhura) kuchengetedza, kuyera, kugadzirisa uye kubvunza kupfuura data mune zvisiri-zvetabular zvivakwa, senge arrays.
Mazhinji mapuratifomu emafaira enhaka anoshandisa SQL-based dhatabhesi, inoda kuti vashambadzi vazive SQL, kana kuvamanikidza kuti varegedze kutonga kwemibvunzo yavo uye chikamu chavo kuIT kana Injiniya. Chekupedzisira, aya mapuratifomu ekare anowanzo gadziridza dhata ravo kuburikidza nehusiku ETL uye anozorodza, achidzora kugona kwevatengesi kuendesa mameseji akakosha uye akakodzera.
Kusiyana neizvi, mapuratifomu emazuva ano akadai se Chinyakare, shandisa zvimwe zvinokatyamadza NoSQL data zvimiro, zvichibvumira yechokwadi-nguva data hova uye API kubatana kubva kune akawanda masosi panguva imwe chete. Aya masisitimu edata akakurumidza kupinda muchikamu uye zviri nyore kuwana kutyaira zvinhu zvemunhu, zvichideredza kwazvo nguva nemukana wemukana wekuvaka nekutanga mishandirapamwe.
Yakavakwa munguva pfupi yapfuura kupfuura avo vanokwikwidza zvakanyanya, mazhinji emapuratifomu aya zvakare anosanganisira kana kutsigira nzira dzinoverengeka dzekutaurirana, senge email, nharembozha, in-app, SMS, bhurawuza kusundira, kugadzirisazve munharaunda uye kutumira tsamba zvakanangana, zvichipa simba vashambadziri kununura zviri nyore kuenderera kumwe kweruzivo sevatengi vanofambisa ruzivo rwavo munzira dzechiratidzo nematanho ekubata.
Nepo mhinduro idzi dzichigona kutenderedza mukana wehurongwa hwekushomeka uye kupfupisa kushambadza nguva-kune-kukosha, kutorwa kwave kunonoka pakati pezvakakura kana zvemirefu-refu mabhureki, ayo setsika anowanzo chengetedza uye ane njodzi. Nekudaro, yakawanda yekubatsira yakachinjira kune matsva kana ari kubuda mabhenji ayo anotakura zvishoma kwazvo nhaka yehunyanzvi mukwende kana manzwiro kushungurudzika.
Vatengi havafanirwe kurega zvavanotarisira zvekukosha, zviri nyore uye neruzivo chero nguva munguva pfupi. Muchokwadi, nhoroondo inotidzidzisa kuti izvo zvinotarisirwa zvinongogona kukura. Kusiya nzira yako yekuita yako haina musoro mumusika une vanhu vakawanda, panguva iyo ruzivo rwevatengi rungangodaro chero mukana wakanaka wevatengesi wekuburitsa nekusiyanisa kukosha kwavo, kunyanya sezvo paine dzimwe nzira dzakawanda dzinowanikwa.
Heano zvipikirwa zvishanu izvo vatengesi nemasangano avo vanogona kuita kuvabatsira kuburikidza nekubudirira shanduko:
Tsanangura iyo ruzivo iwe unoda kununura. Rega iyo ive iyo kambasi poindi yezvimwe zvese.
Bvumirana kuti shanduko inodiwa uye Commit pazviri.
Ongorora mhinduro dzingave nyowani kana dzisina kujairika.
Sarudza kuti iyo mubayiro yemhedzisiro yacho yakakura kudarika njodzi dzinoonekwa.
Rega vanhu vatsanangure iyo urongwa; rega maitiro acho aise zvinodiwa nehunyanzvi.
Vatengesi vane kuchera gomba, asi hauiti vane kushandisa teaspoon.
Kumbira Demo Inogona
Tags: zvinogonekakushambadzira kushambadziraPersonalizationkutengesa munhu
Garin ndiye Director weDhiri Strategic pa Chinyakare, chikuva chinopa simba kuvashambadzi veB2C kutora yavo nzira yekuyambuka-chiteshi mameseji nekumisikidza yakachinjika uye inotyisa data modhi yekuzivisa muchinjiko chiteshi 1: 1 hurukuro kuburikidza neemail, nhare, webhu uye nzanga nzira.